कुटीकुटी मारे श्रीमतीलाई…
बाग्लुङ । सामान्य विवादको क्रममा श्रीमानले लठ्ठी प्रहार गर्दा बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ मा ७० वर्षीया श्रीमतीकोे मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ मादकपदार्थ सेवन गरेर घर आएका ६६ वर्षीय देउप्रसाद
घटस्थापना र दशैँ टिकाको साइत
दशैँको टिकट बुकिङः कुन यातायातमा काट्ने ?
काठमाडौं । दशैको अग्रिम टिकट बुकिङ आजदेखि सहज हुने भएको छ । प्रालि सम्बद्ध व्यवसायीले हिजोदेखि नै टिकट खोलेका कारण टिकट बुकिङ सहज हुने भएको हो । नयाँ (गोगंबु) बर्सपार्कका
नेकपाले टुंग्यायो प्रदेश नेतृत्व, कहाँ काे ? (नामसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लामो प्रयासपछि प्रदेश नेतृत्व टुंग्याएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेको हो । ७ प्रदेश मध्ये ६
तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पामा आठ करोडको लगानीमा ‘मस्र्याङ्दी रिभर भ्यू रिसोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पृथ्वीराजमार्ग भएर यात्रा गर्ने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यवसायी महेन्द्रमोहन भट्टराईले रिसोर्ट स्थापना गर्नुभएको हो
मृत्युसंस्कार पछि जिउँदै जीवन
पोखरा । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, भूकम्पका कारण मरेको भनी आफन्तले काजकिरिया गरिसकेका अछामका जीवन बूढा पोखरामा भेटिनु भएको छ । अछामको विनायक पञ्चदेवल नगरपालिका–५ का १९ वर्षीय जीवन
बजेट पचाउने काम हुदैन: शेर्पा
हिमलाल पराजुली स्याङ्जा । अखिल नेपाल फुटवल संघका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले हिजो जस्तो बजेट पचाउने काम अब एन्फाले नगर्ने बताउनुभएको छ । जिल्लामा सामान्य खालका प्रतियो गिताको आयोजना गरेर बजेट
सन्देश पौडेल लमजुङ । लमजुङ, मनाङ र गोरखाको सिमा क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सूचना सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय त्रासमा परेका छन् । एकसाता अघिमात्रै ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्रमा फेरीपनि वर्षा
पर्यटक तान्दै भकुण्डेको होमस्टे
बाग्लुङ । गाउँले जनजीवन, सत्कार, खानपान, घुमफिर र संस्कृतिको आनन्द बटुल्ने स्थलका रुपमा भकुण्डेको घरबास (होमस्टे) चिनिन थालेको छ । घरबास सञ्चालनमा आएपछि ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ
बलात्कारबाट जोगिन आत्मरक्षा अभियान
काठमाडौं । समाजमा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर बलात्कारको प्रयास भए कसरी प्रतिरक्षा गर्ने, बलात्कारीको कुन अंगमा प्रहार गर्दा बलात्कारबाट जोगिन सकिन्छ ? यस्तै सिकाइ अभियान पनि